गणतन्त्र दिवसमा रात्रिभोज ! | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो गणतन्त्र दिवसमा रात्रिभोज !
हालै सरकारले थुप्रै सार्वजनिक विदा कटौती गर्‍यो, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, नागरिक सेवा दिवस आदि । विदा नभएपछि यी सबै दिनमा अफिस खुल्छन् । तर, दिवसका औपचारिक कार्यक्रम अर्थात् समारोह चैं कटौती भएका छैनन्, ती पुरानै परम्पराअनुसार नै चल्छन्, चलिरहेका छन् । कार्यक्रम समारोह भनेपछि दिवाभोज र रात्रिभोज पनि चल्छन् । अस्ति गणतन्त्र दिवसमा पनि राम्रै भोजहरु आयोजना भए क्यारे । दिवसहरुको अवसर पारेर सरकारले एकातिर भोज गर्छ, एनजीओहरुले अर्काेतिर । आहा क्या मज्जा !
तर सबैले भोज चैं किन एकै दिन गर्‍या होला ? आलोपालो कसैले एक दिनअघि, कसैले एक दिनपछि समेत मिलाएर गद्र्या भए खाने मुख भएका जुँगेहरुलाई र जुँगा नहुनेहरुलाई समेत तीन दिनसम्म रमाइलो हुन्थ्यो नी ! हेर्नुस् न कुनै हप्ता एउटै भोजको निम्तो हुँदैन । तर कुनै बेला एकैदिन ३/४ वटासम्म भोज भ्याइदिनुपर्ने । खासगरी बिहेको लगन परेका बेला त यस्तै हुन्छ । अनि यस्ता राष्ट्रिय दिवसमा पनि कहाँ मात्रै जानु ? कहाँ मात्रै खानु ? भोज पनि कति प्रकारका । सुख्खा भोज मात्र । सुरापानसहितको रात्रीभोज । प्रितिभोज । धन्यवाद भोज । बिदाई भोज । विवाह भोज, पास्नी भोज । जन्म भोज । मृत्यु भोज पनि हुँदो रैछ । गाउँघरतिर भोज खाएर थुप्रै जना बिरामी भएको र अझ कतिपयको मृत्युसमेत भएको समाचार बेलाबेलामा आउँछ । त्यै हो मृत्यु भोज ।
बिहेको निम्तोकार्डमा चैँ प्रायः प्रितिभोज भनेर लेखिएको हुन्छ । ठीकै हो, बिहे भोजलाई त प्रितिभोज भन्न मिल्ला । प्रिति जुराइदिएका कारण प्रितिभोज । वा भोजन चैँ प्रितिकर हुन्छ भनेर त्यस्तो भनेको पनि होला । तर, धेरैजसो पार्टी प्यालेसमा खाएको प्रितिभोज त्यति प्रितिकर चैं लाग्दैन । खासगरी यो पंक्तिकारको पेटले भने खाएको केही समयपछि नै राम्रै विद्रोह शुरु गर्छ । यो सम्झेर अर्काे पटक भोजहरुमा नजाऊँ जस्तो पनि लाग्छ । तर, आफूलाई सम्झेर, सम्मान गरेर बोलाएको ठाउँमा नजान पनि मिलेन । नजाँदा फेरि आफैलाई कताकता केके न छुट्यो कि जस्तो पनि लाग्छ । के गर्ने गर्ने हुन्छ ।
त्यसकारण हिजोआज चारओटा प्रितिभोज पुगेर आए पनि अन्तमा घरको भान्छामा राति छामछाम छुमछुम गर्ने बानी परिसकेको छ । एकपटक त सबै सुतिसकेका कारण आफै खाना खोज्ने क्रममा भाँडा खसेर ठूलो आवाज आएका कारण चोर आयो भन्ठानेर कसो आफ्नै परिवारको पिटाइमा परिएन । तर पार्टीमा बफेको लामालामा लाइनमा बसेर मासुदेखि मिठाईसम्म, भातदालदेखि सलाद र पापडसम्म ड्याम्म एकैचोटी एकै ठाउँमा उरुङ लगाएर बढो स्वाद मानीमानी प्रितिभोज खानेहरुको पेटले विद्रोह गर्छ कि गर्दैैन होला ? अझ प्रितिभोज अघि चिल्ला, नुनिला, पिरा स्न्याक्सका साथ चिसो, मदिरा वा अन्य झोल पदार्थ खानेहरुको शरीर खुशीले कति नाच्छ होला ? सोध्ने कुरा पनि भएन ।
भोजहरु आयोजना भएनन् भने कहाँ भेट्न जाने आफन्तहरुलाई ? नयाँ घर किनेकोे, खसी छिनेको, नयाँ साडी वा नयाँ गाडि जोडेको, विरोधीको घमण्ड तोडेको भन्नेजस्ता आफ्ना गौरवगाथा कहाँ गएर कसलाई सुनाउने ?
आखिर यति धेरै भोज कसले, किन गर्छन् त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । उत्तर सजिलै छ, भोज ख्वाएर मान्छेहरुलाई आफ्नो बनाउँदै जाने चलान पुरानै हो नि । यसलाई भोज राजनीति पनि भनिन्छ । त्यसैले त दोस्रो पटक राष्ट्रपति हुनुभन्दा अघिसम्म विद्या भण्डारीले थुप्रै पटक फरकफरक नेताहरुलाई बोलाएर भोज गरेको ‘भोजनीति’को कुरा पनि समाचारमा आएकै थियो । अझ प्रचण्डको त पूरै परिवारमात्र होइन उनीहरुका छोरी, ज्वाइँ, बुहारीसमेतलाई भण्डारीले राष्ट्रपति निवासमै बोलाएर भोज खुवाएकी थिइन् क्यारे । उसो त डा. रामवरण यादवले पनि राष्ट्रपति हुँदा भएजति मधेशवादी दलका नेताहरुलाई बोलाएर माघे संक्रान्तिमा खिचडी भोज ख्वाएको कुराले त्यस बेला बजार तातेको थियो । त्यस्तै, पार्टीहरु एकीकरणको सहमति भएको बहानामा कति भोज खाए खाए नेताहरुले । चुनावताका पनि नेपाली मतदाताहरुलाई नेताहरुले दिने गरेको भोज खान भ्याई नभ्याई हुने गरेको छ ।
सर्वसाधारण व्यक्ति र सरकार अनि राजनीतिक नेता मात्र होइन, संस्थाहरु पनि भोज गरिरहने कुरामा पछि चैँ छैनन् है । नेउवा महासङ्घ, नेपाल चेम्बर, सीएनआई र तिनका सदस्य कम्पनीहरु त वर्षैभरि अनेकखाले भोजको आयोजन गरी नै रहन्छन् । सक्नेले गर्नु पनि पर्छ । नत्र होटल र पार्टिप्यालेसहरु कसरी चल्छन् । त्यत्रो लागानीमा खुलेका पार्टिप्यालेसहरु चलाउन पनि भोजहरु त गरिरहनै पर्छ । सिंहदरबारभित्र भइरहने भोज श्रृंखलाको त यहाँ कुरै नगरौं । हुन पनि भोज नखाई मोज हुँदैन नि । मोज नभै हाकिमी पोज आउँदैन, सेल्फी खिच्न । भोज खानेको सोच नै हेर्नुस् न कस्तो विकसित हुँदै जान्छ । पहिले पहिले काठमाडौंमा ‘ठकुरी बिग्रे मोजले, नेवार बिग्रे भोजले’ भन्थे । तर जमाना बदलिइसकेको छ । अहिले त भोजले मान्छे सप्रिन्छ, व्यापार उँभो लाग्छ । वर्तमानमा उद्घाटन, मिटिङ, पुरस्कार, मान, सम्मान, भोज त रोज गर्नुपर्छ । सरकारले सम्वृद्धि सम्वृद्धि भन्ने गरेको छ । यस्तै त हो सम्वृद्धि भनेको ।
अर्को कुरा, भोजहरु आयोजना भएनन् भने कहाँ भेट्न जाने आफन्तहरुलाई ? नयाँ घर किनेकोे, खसी छिनेको, नयाँ साडी वा नयाँ गाडि जोडेको, विरोधीको घमण्ड तोडेको भन्नेजस्ता आफ्ना गौरवगाथा कहाँ गएर कसलाई सुनाउने ? छिमेकीलाई मात्र कति सुनाइरहने ? त्यसैका लागि पनि पार्टी वा भोज त भइरहनै पर्छ, गइरहनै पर्छ । भोज हाम्रो परम्परा पनि हो । यसलाई जोगाइराख्नु पर्छ है ! जे होस्, यो भोजभतेर परम्परा जोगाइराख्न सरकारले जारी राखेको अथक प्रयासको भने प्रशंसा गर्नैपर्छ ।